Nolol Cusub, Kaniisadda Adduunka ee Switzerland Switzerland (WKG)
Akhristaha qaaliga ahow
Guga waxay ii tahay farxad weyn in aan la kulmo sida awooda ubaxyada Maarso ama barafka ay u xoog badan yihiin oo ay si aan kala go 'lahayn uga baxaan barafka una sii socdaan iftiinka. Dhowr bilood ka hor, waxaa lagu dhex beeray sidii digriiga yaryar oo dhulka ah waxayna hadda ku raaxeysanayaan nolol cusub oo qayb ka ah abuuritaanka.
Waxa aad dabiici ahaan la kulanto mucjisooyinka abuurku waa astaan ​​u ah heerka qoto dheer ee noloshaada. Laga bilaabo maalinta ugu horeysa, noloshaada jirka waxay u dhigantaa horumarka ubaxa qaaliga ah ee guluubka. Su’aasha hadda jirta ayaa ah, heerkee ayaad joogtaa xilligan?
Wie dem auch sei, Sie dürfen in jedem Zustand Ihres Lebens die volle Gewissheit haben, dass der allmächtige Schöpfer Sie liebt und Sie in seinen Augen viel wertvoller sind als die schönste Blumenpracht. "Warum sorgt ihr euch um die Kleidung? Schaut die Lilien auf dem Feld an, wie sie wachsen: Sie arbeiten nicht, auch spinnen sie nicht. Ich sage euch, dass auch Salomo in aller seiner Herrlichkeit nicht gekleidet gewesen ist wie eine von ihnen" (Matayos 6,28-29).
Intaas waxaa sii dheer, Ciise wuxuu kuu xaqiijinayaa in haddii aad isaga rumeyso, uu ku siin doono nolol cusub. Oo kaliya maaha ubax gaabanwaqti, laakiin daa'in.
Waxa ugu fiican ee isbarbar dhiggaani waa tusaalaha Ciise. Wuxuu ku noolaa nolol aan dembi lahayn oo wuxuu u daayay adiga iyo adiga dembiile ahaan si aan u wadaagno nolosha weligeed ah. Ciise wuxuu inoo furay jidka silica, dhimashadiisa iyo sarakicistiisa. Wuxuu adiga iyo aniga ka keena nolosha ku meel gaarka ah nolol cusub, nolosha weligeed ah ee boqortooyadiisa.
Waxaan u maleynayaa in runtaani tahay farxad dhab ah. Waxay u xoog badan tahay sida qorraxda ku dul taal sawirka daboolka oo dhalaalaya barafka. Qiyaas in Ciise, oo ah adeegaha ugu weyn abuurista cusub, uu doonayo inuu nolosha kula wadaago. Waxaan kuu rajaynayaa Ciid wanaagsan, oo nolosha cusub ee Ciise Masiix